Raya: a category error, and a catalog of errors By Alemayehu Weldemariam, March 24, 2019 The people of Raya in northern Ethiopia have diverse origins and so defy simple categorizations. A more accommodating federation and responsive politics would help resolve… Read More »
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 24, 2019 SBO Bitootessa 24, 2019. Oduu, Ibsa ABO fi Rakkoo Sulula Finca’aa keessa jiru irratti gaaffii fi deebii taasisame
Akkamitti dhidhima kana keessa Deebinee Seenne? Damee Boruu tin, Bitootessa 24, 2019 Xiyaara Itoophiyaa dhiyyenya kufe yoo agartanii jiraatan lafatti kufee hin cacabne. Humna guddaan utuu deemaa jiruu waan mataa isaa ol qabachuu dadhabeef mataan dhidhima seene. Qabsoon Uummata Oromoo… Read More »